विदेश जानेलाई यस्ता शर्त राखेर खोलियो श्रम स्वीकृति – Rapti Khabar
विदेश जानेलाई यस्ता शर्त राखेर खोलियो श्रम स्वीकृति
काठमाडौं, भदौ १७ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि सबै खालका श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको छ। बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको जानकारी गराएको हो।
तर श्रम स्वीकृति लिनका लागि शर्त राखिएको छ। २०७६ फागुन २९ गते पहिले मागपत्र प्रमाणित भएर पूर्व स्वीकृति लिएकाको हकमा अन्तिम स्वीकृति लिनका लागि विदेशका रोजगारदाताको नो अब्जेक्सन प्रमाण पत्र आवश्यक पर्नेछ। यस्तो प्रमाण पत्र हालै जारी भएको र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गराएर पेश गर्नु पर्नेछ।
यस्तै पूर्व स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेका र नयाँ माग पत्रको हकमा नो अब्जेक्सन प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्नेछ। नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनका लागि रोजगारदाता कम्पनीले आधिकारिक इमेलबाट हालै जारी भएको नो अब्जेक्सन लेटर वैदेशिक रोजगार कार्यालयको इमेलमा पठाउनु पर्नेछ।
सरकारले गएको फागुन २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। पुनः श्रम स्वीकृति भने यस अघिनै खुलिसकेको छ।
नेपालीलाई नि:शुल्क ल्याइदिन्छु भन्नेलाई ८ सयको कोटा देखाउँदै सरकार
गएको सोमबार सयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)को राष्ट्रिय ध्वजाबाहक इतिहाद एयरवेजले आफ्नो दूतावास हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एउटा निवदेन दियो। उक्त निवेदनमा ११ सय २० जना नेपालीलाई २ हप्‍ताको समयमा नि:शुल्क काठमाडौं ल्याइदिन्छु र हामीलाई उडान तथा अतवरण अनुमति दिनुहोस भन्ने लेखिएको थियो।
मन्त्रालयले भने तत्काल जवाफ दियो ‘ हामीले अबको १ महिनाका लागि चार्टर्ड तथा नियमित उडानका लागि तालिका निर्धारण गरिसकेका छौ। अब थप अनुमति दिनसक्ने अवस्था छैन।’
एयरलाइन्सले ४ सेप्टेम्बरदेखि १८ सेप्टेम्बरसम्म यी चार्टर्ड उडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले यी उडानमा आउने कुनै पनि नेपालीले पिसिआर परीक्षण र टिकटको शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ। युएईस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका नेपालीलाई मात्र ल्याउने उसले बताएको छ।
तर सरकारले सुरुमै भनिदियो हामीले दिनमा ८ सय जनाभन्दा बढीलाई ल्याउन सक्दैनौ। दिनमा ८ सय आउने उडान स्वीकृत यसअघि नै गरिसकेका छौ।
इतिहादले प्रस्ताव गरेको विषयमा सेतोपाटीले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रश्न राख्दा उनले पनि त्यही जवाफ दिएका थिए।
‘साथीहरुले मलाई थप चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति माग गरेको कुरा भन्नुभएको थियो। तर अहिलेका लागि हामीले १ महिनासम्मका लागि चार्टर्ड र नियमित जति दिएका छौँ त्योभन्दा थप दिनसक्ने अवस्था छैन’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले दैनिक ८ सयमात्र ल्याउनसक्ने भनेर जसरी नि:शुल्क आउनपाउने नेपालीलाई रोक्न खोजिरहेको छ। यहाँनेर सरकारकै तर्क खण्डित भएको छ। सरकारले दिनमा ८ सयभन्दा बढीलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएको छ।
तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले आरटी-पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपालीलाई शर्तनामा गराएर होम क्वारेन्टिन पठाइने बताइसकेका छन्। यसको अर्थ नेगेटिभ रिपोर्ट भएकाहरु सिधै घरमा गएर बस्नसक्छन्।
यस्तो अवस्थामा किन क्वारेन्टिनको नाम देखाएर रोक्न खोजिंदैछ निशु:ल्क ल्याइदिने उडानलाई? पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको। आज बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए।
‘यो बारेमा मलाई थाहा छैन। थाहा पाएपछि प्रतिक्रिया दिन्छु’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
किन झुलाइन्छ यस्ता उडानलाई?
अहिले संसारभर कोरोना महामारी छ। योबीचमा हरेक देशमा उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि एयरलाइन्सहरु अति प्रभावित छन्। यस्तै उद्धार उडान सकेसम्म सबै देशले आफ्नै एयरलाइन्स मार्फत् गर्न चाहन्छन्।
शुल्क तिर्नेमा त धेरथोर अरु एयरलाइन्सले पाउछन् भने निशु:ल्क हुनेमा देशहरुले आफ्नै देशको एयरलाइन्स मार्फत् उडान गराउन चाहन्छन्। नेपाल सरकारले यही कारण देखाएर इतिहादलाई रोक्न खोजेको हो।
‘यदि निशु:ल्क दिने हो भने हामीले दिएका नियमित उडानमै पठाइदिए भयो। हैन भने एउटा एयरलाइन्सलाईमात्र व्यापार पोस्ने काम कसरी सहजै स्वीकार गर्ने’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने’ तर बाहिरको भावना फरक छ। हजारौ नेपाली विदेशमा अड्किएका छन्। उनीहरुलाई निशु:ल्क आउन पाउने अवसरलाई कुल्चिएको भन्ने आरोप लाग्छ।’
सरकारले युएईमा नियमित उडान अनुमति पनि दिएको छ। तर त्यो नियमित उडानमा आउन चाहने जतिलाई आउनसक्ने अवसर भन्ने वित्तिकै पाइदैन।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारहरुको आफ्नो एयरलाइन्स संरक्षण गर्ने नीतिका कारण देखिएको विवाद जस्तो लागे पनि यसमा अरु कुरा पनि छन्।
पहिलो कुरा यसमा यदि चार्टर्ड अनुमति दिएपछि नेपालका ट्राभल व्यवसायीहरुले यसमा व्यापार पाउँदैनन्। जुन लामो समयदेखि चार्टर्ड हुँदा सिमित व्यवसायीलेमात्र अवसर पाएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरुको कुरा सुनेर प्रभावित भएको हुनसक्छ।
‘यदि युएईबाट निशु:ल्क कामदार ल्याउने ८ चार्टर्ड उडान गर्दा नेपाल सरकारको अधिकार भनेको अनुमति दिनेमात्र हुन्छ। यसमा कुनै पनि नियन्त्रण हुँदैन। व्यवसायी पनि उतैका हुन्छन् टिकेटिङ गर्ने जसबाट सरकारले आफ्नो नियन्त्रण नहुने भनेर पनि अनुमतिका लागि घुमान खोजेको हुनसक्छ’ एक व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।
चार्टर्डभन्दा दोब्बर महंगो भाडा नियमितमा
जुन देशबाट सरकारले नेपालीलाई निशु:ल्क ल्याइदिने एयरलाइन्सले आवेदन दिएको छ। त्यही देश युएईबाट नेपाल आउन भाडा १ लाख २५ हजारसम्म तोकिएको छ। नियमित तर्फ। जवकी चार्टर्डमा यो रुटमा भाडा ६० हजारसम्ममात्र थियो।
‘पैसा तिरेर आउनेहरुलाई पनि भाडा यति धेरै छ कि सामन्य अवस्थाको राउन्ट ट्रीपभन्दा महंगो भाडा छ, अर्कोतिर सरकारले निशुल्क ल्याउनेलाई रोक्दैछ। सेप्टेमब्र ११ देखि भिसा सकिएकाहरुलाई पेनाल्टी पनि लाग्दै छ’ एक व्यवसायीले भने।
सुरुदेखि नै मर्कामा श्रमिक
सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गर्‍यो। नेपाल आउन तयार भएका कयौं नेपाली विदेशमै अड्किए। लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा रहेका विदेशीहरु धमाधम स्वदेश फर्किए। ती जहाज उताबाट आउँदा रित्तै र जाँदा मात्र यात्रु लिएर गए।
तर नेपालीहरु भने औपचारिक रुपमा स्वदेश फर्किने मौका लकडाउन भएको साढे २ महिनापछिमात्र पाए। अर्थात् सरकारले उद्धार उडानहरु जेठ ३२ गतेदेखिमात्र सुरू गर्‍यो। यसो गर्दा महंगो चार्टर्ड भाडामा यात्रुहरू परे।
सामन्यतया चार्टर्ड उडानमा दुइतर्फीको हिसाब गरेर निर्धारण गरिन्छ। यसो हुँदा एकतर्फीमात्र यात्रु हुँदा यात्रुले महंगो टिकट शुल्क तिर्न बाध्य भए। यदि सरकारले सुरूदेखि नै विदेशी बाहिरिने उडानबाट नेपाली पनि ल्याएको भए सस्तोमा आउन पाउने थिए।
नेपालीका लागि चार्टर्ड उडान सुरू भएपछि भने सरकारले भाडा निर्धारण गरेको थियो। यद्यपी त्यसमा पनि कालोबजारसमेत भएको भन्दै सरकारसम्मै उजुरी पर्‍यो।
नेपाल आउनेलाई मात्र होइन, जानेहरूलाई पनि उत्तिकै चर्को भाडा असुल गरे एयरलाइन्सहरूले। नेपालबाट चार्टर्ड उडानबाट एक गन्तव्यमा लिएपछि त्यहाँबाट तेस्रो देश जानेहरूलाई नियमित उडानमा पठाए पनि भाडा भने चार्टर्डकै असुल गरे।
यसैबीच सरकारले विदेशमा बेखर्ची भएकाहरूलाई निशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको सूचीकरण हुन सकिरहेकको छैन। ट्राभल एजेन्सीहरूले धेरै पैसा तिर्ने यात्रुहरूमै जोडबल गर्दा र दूतावासहरूले पनि राम्रोसँग समन्वय नगर्दा बेखर्चीहरुले प्राथमिकता अहिले पनि पाउन सकिरहेका छैनन्।
एयर अरेबियाले १४२ यात्रुको होटल क्वारेन्टिन खर्च तिर्नुपर्ने
एयर अरेबियाले १४२ जना यात्रुको होटल क्वारेन्टिन खर्च तिर्नुपर्ने भएको छ। कुनै पनि उडानमा पिसिआर गरेका र नगरेकालाई एकठाउँमा राखेर ल्याउन नपाइने सरकारी निर्देशको अवज्ञा गर्दै यात्रु ल्याएको भन्दै एयरलाइन्सलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्वारेन्टिन खर्च तिराउने निर्णय गरेको छ।
२५ अगष्टमा १६१ यात्रु लिएर युएईको सारजाहबाट काठमाण्डौ आएको थियो। त्यसमध्ये १४२ जना यात्रुको रकम फिर्ता गराउन पर्यटनन्त्री योगेश भट्टराईले निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट भएकालाईमात्र उडानबाट ल्याउन पाइने निर्देशन जारी गरिसकेपछि एयर अरेबियाले १४२ जना पिसिआर नेगेटिभ भएका,१८ जना आरडिटी गरेका र एक जना केही पनि नगरेको यात्रु ल्याएर आएको थियो।
सबै यात्रुलाई होटल क्वारेन्टिनमा राखिएको छ।
एयलाइनले त्यसरी यात्रु ल्याएपछि मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी पछि छानविन गर्न समिति बनाइएको थियो। पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिको अध्ययन निष्कर्षअनुसार क्वारेन्टिन खर्च असुल गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा घटाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिने
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशी एयरलाइन्सलाई नेपाल एयरलाइन्सले लिने गरेको भाडाभन्दा धेरै नलिन निर्देशन दिने भएको छ।
मन्त्रालयले यसका लागि नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयलाई सहुलियत दरमा भाडा निर्धारण गर्न पहिला निर्देशन दिने त्यसपछि विदेशी एयरलाइन्सलाई नि सो भन्दा धेरै भाडा नलिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाली एयरलाइन्सल उडान नगर्ने ठाउँमा भने समुन्वयन गरेर सहजीकरण गरिने छ
त्यस्तै चार्डर्ड उडानका सन्दर्भमा भने सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै लिन नपाइने र यदि त्यसो भएमा अनुमति नदिने मन्त्रालयले नि्णय गरेको छ।
सरकारले नियमित उडान खोलेपछि धेरै गन्तव्यमा चार्टर्डभन्दा तीनगुणसम्म महंगो भाडा निर्धारण गरिएको थियो।
यसअघि सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई चार्टर्ड उडानबाट नेपाल आउन दिएको थियो। चार्टर्ड उडानमा भाडा महंगो भएको तथा सीमित ट्राभल एजेन्सीले मात्र लाभ लिएको भन्ने गुनासो आएपछि सरकारले केही गन्तव्यमा नियमित उडान खोलिसकेको छ।
तर नियमित उडानको भाडा चार्टर्डभन्दा महंगो भएको छ। नियमित उडानमा चार्टर्डमा जस्तो सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले एयरलाइन्सहरुले माग र आपूर्तिकै आधारमा भाडाको हिसाब गर्दा महंगो देखिएको छ।
हवाइ यात्राका लागि टिकेटिङ गर्ने प्रणाली जिडिएस (ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम)मा हाल उल्लेखित भएको भाडादर चार्टर्डभन्दा धेरै महंगो देखिएको छ। कतिपय गन्तव्यमा दोब्बरभन्दा बढी भाडा देखाइएको छ।
ट्राभल एजेन्सीहरुले दिएको जानकारीअनुसार केही दक्षिण कोरिया बाहेक अधिकांश नियमित उडान गर्ने भनिएका गन्तव्यमा चार्टर्डभन्दा महंगो भाडा हुने छ।
संयुक्त अरब इमरेट्सका सारजाह, आबुधावी र दुबइको भाडा चार्टर्डभन्दा करिब दोब्बर महंगो भाडा एयरलाइन्सहरुले प्रणालीमा भाडा देखिएका छन्। सारजाहको ८२६ अमेरिकी डलरसम्म भाडा देखाइएको छ भने दुबइको पनि ८ सय डलरम्म देखाइएको छ। युएइका तीनवटै गन्तव्यमा चार्टर्ड ४ सय डलरसम्म थियो।
त्यस्तै मलेसियाको चार्टर्ड भाडा ४ सय डलरसम्म नै भएकोमा ६५० डलरसम्म भाडा देखाइएको छ।
आज एकैदि हालसम्मकै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुन जिल्लामा कति ? [विवरणसहित]
असोज २, काठमाडौं । नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ४ सय ५८ वटा पीसीआर परीक्षणमा २०२० संक्रमित भेटिएका हुन् । नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६१ हजार ५ सय ९३ पुगेको छ । शुक्रबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ […]
विजयादशमीमा टीका कुन बेला लगाउने, कसरी लगाउने ? [भिडीयोसहित]
Posted on October 25, 2020 Author Rapti Khabar
कात्तिक ९, काठमाडौँ- दसैँको दसौँ दिन अर्थात विजयादशमी यसपल्ट सोमबार परेको छ। घटस्थापनाको दिन कलश राखेर जमरा रोपी नौ दिनसम्म गरिएको पूजाआजाको विसर्जन यही दिन गर्ने प्रचलन छ। त्यस्तै, विजयादशमीका दिन टीका लगाउने गरिन्छ। टीकाको साइत हेरेर पहिलो टीका लगाउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यद्यपि विजयादशमीको दिन जुनसुकै बेला पनि टीका लगाउन मिल्ने विज्ञहरु बताउँछन्। […]
सक्रिय संक्रमितको संख्या ३३ हजार नाघ्यो, देशभर कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? [विवरणसहित]
Posted on October 12, 2020 October 12, 2020 Author Rapti Khabar
असोज २६, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ४ हजार ४७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या एक लाख ११ हजार आठ सय २ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर प्रवक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३३ हजार ८८० पुगेको छ । अहिले संस्थागत आइसोलेसनमा […]
‘राष्ट्रकवि घिमिरे एक सातादेखि मृत्युको तयारी गरिरहेका थिए’ [भिडियो]